16 kamid ah calaamadaha lagu garto ninka ku jecel
Calaamadaha lagu garto ninka ku jecel, hadaba maxaa lagu gartaa ninka wax jecel, nin kastaa lagama helo calaamadahaan ee haddii aad ku aragto ka ilaasho dumarka kale.
Waan dareemayaa inuu i jecelyahay laakin maxaa ii xaqiijinayo inuu yahay nin aniga i jecel?
Waxaa lagu gartaa ninka ku jecel
Haddii aad raacdo tilmaamahani waxaa si fudud ku ogaan kartaa ninka daacada ku jecel. Ninka ku jecel wuxuu leeyahay calaamado ka duwan nimanka kale waana sababta kuu xaqiijineyso in uu yahay ninka dhabta ah ee adiga kuu qalmo
Inkastoo uusan i tusineynin calaamad dhab ah oo aa ii xaqiijineyso inuu i jecelyahay hadana qalbiga ayaan ka dareemaaa inuu yahay nin i jecel. Miyuu i jecelyahay mise anigaa maadeysanayo? Miyeey jirtaa calaamad lagu garto ninka ku jecel? Jawaabta: Haa. Maxaa tahay hadaba?
Ragu way ku kala duwan yihiin calaamadaha ay muujiyaan, balse waxaa jira qaar ay ka siman yihiin. Kala duwanaanta abuurka raga ayaa keena kala dookha. Si kastaba ha noqotee waxaa lagu gartaa ninka ku jecel calaamadahaan.
1. Wuu kuu nugul yahay
Waan kugu qanacsanahay, waan ku daryeelaa, waana ku jeclahay, waan ku ixtiraama waana kugu kalsoonahay. Bilaaa shuruud. Noloshu aad ayeey u gaaban tahay weyna adag tahay inaan dareenkeyga nafteyda ku soo koobo. Erayadani kuma qarin karo mar dambe qalbigeyga, maxaa yeelay weey idhaawacayaan: Waan ku jeclahay, maalinba maalinta ka dambeysona waana ku sii jeclaanayaa! Ma aqaano sababta balse waxaan dareemayaa inaa tahay aduunkeyga.
Inuu kuu nuglaaado waa calaamad lagu arko ninka ku jecel, waxay ka turmaysaa inuu culays xoog lihi haysto oo jacayl ah. Wuxuu shaatiga u xooran siduu kuu siin lahaa jaceylka dhabta ah ee aad kasbatay.
2. Waxaa u tahay gabadha ugu qurux badan aduunka
Ninka ku jecel waxaa u tahay gabadha ugu qurux badan xittaa haddii aad is ogtahay inaadan ahayn. Sabab? Sababtoo ah qofka markuu si dhab ah kaaga helo waxaa u tahay aduunkiisa. Marka ha dhibsan hadduu amaantaan kaa badiyo maxaa yeelay waa calaamad kamid jaceylka uu kuu qabo.
3. Waa nin daacad ah
Ninku had iyo jeer maba ahan mid daacad ah, marka laga reebo inuu ku qasbanaaday inuu runta kuu sheego. Wuxuu jecelyahay inuu yareeyo dooda. Inuu kula doodo waxay goor walbaa ku ridaysaa madax xanuun. Ninka daacada ah wuxuu diyaar u yahay inuu si kastaba runta kuu sheego, kumaan jeerna kaa raali galiyo qaladaadkiisa. Haddii aad heysato nin daacad kuu ah kuna jecel, ilaasho waayoo sanadkaan la joogo ma jiro nin daacad ah.
Qish: Waxaad rabtaa inaad ogaato sida loo soo jiito ninka, hadaba halkaan riix:
Waxaan rabaa inaan ninkeyga u diro erayo subax wanaagsan ah oo aad u macaan
4. Waa nin kuu samraa
Ninka jecel waa nin samir fara badan leh, wuxuu kuu leeyahay dulqaad xad dhaaf ah. U jeedadiisu waxay tahay muujinta inuu ku hayo jaceyl xad dhaaf ah, taasoo sababeyso inuu wax walbaa kuugu dulqaato. Marna kama suurto galayso inuu noqdo bilaa dulqaad, waana marka xagaaga laga eego. Hadaad balan u jarto, amma aad ku xanaaqdo kama ficil qaadanayo, waayo meel ayaad kaga taal.
5. Ninku wuu ka sheekeeyaa gabadha uu jecelyahay
Waxaa calaamadani ka siman dumarka iyo raga. Waxaad arkaysaa ninka oo ka faalloonaya gabadha uu jecel yahay. Wuxuu si joogto ah uga hadlaa dhaqamada fiican ee gabadha, gaar ahaan, quruxdeeda, hadalkeeda, qosolkeeda, socodkeeda, xaragadeeda, sheekadeeda, farriinteeda IWM. Laakiin marku arrimahan ka hadlayaa waa markuu la joogo saaxibadiisa dhabta ah. Wuxuu ku soo celcelinayaa hadaladii idin dhex maray.
6. Mr Yes Man Wax-kasta-haye
Dabcan sida ay u jeceshahay gabadha ninka ay rabto inay ka qanciso wax kastaa ayuu ninkana u jecelyahay inuu ka qanciyo gabadhu uu sida dhabta ah u jecelyahay.
Mar kasta oo ninka ay wax weydiiso gabadhu uu jecel yahay wuxuu ugu jawaabayaa haye, xittaa haddii aanu awoodi karin. Waayo waxa haya culayska uu leeyahay jacaylku. Shayga ay gabadhu ka codsatay haddii aanu awoodi karin wuxuu caawimo weydiisanayaa saaxiibadiisa dhabta ee aanay waxba kala qarsan.
7, Ninka sida dhabta ah kuu jecel waa sida Lafoole
Lafoole aa? Durbaba dad badani ayaa waxay isweydiinayaan sababta aan u soo qaatay Lafoole. Wax kale ma ahan ee gabar walbaa markeey maqasho Maxamed Xasan Xuseen (Lafoole) durbaba waxaa qalbigeeda ku soo dhacayo heeso jaceyl ah iyo erayo macaan.
Oonta aan u qabo
Allaa igu ogeee
Uumi baa ka baxa
Waxaan Lafoole ku keenay xaga amaanta, waa fanaan aad u amaano dumarka. Sidaa si lamid ah ninka ku jecel waa mid had iyo jeer ku amaano. Ninka ku jecel ma adeegsado kaliya erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh ee wuxuu sidoo kale ku dadaalayaa inuu kugu qaabilo jawi fiican iyo hadal qiimo leh, si aanad uga cadhoon. Waxaa inta badan afkiisa ku badan erayo jaceyl oo qurux badan sida,walaashey, macaaney, qaaliyeey, qalbigaygiyeey, noloshaydiyeey, wadnahaygiyeey, indhahaygiyeey, jidhkaygiyeey, IWM.
8. Waa nin hadaaq badan
Waxaa ninka ku bata halmaanka, waxaad arkaysaa isagoo ku halmaamaya magacii qofka u jeclaa. Muddo ka dib wuu ka noqonayaa, waxaanu dhahayaa waan ku khaldamay, balse waxa jiitay wixii qalbigiisa ku jiray.
9. Telefoon-ku-hadal badan
Wuxuu aad ugu dadaalaa inuu xiriir dhaw la yeesho gabadha uu jecel yahay, Taasina waxay ku keentaa inuu markasta telefoon ku hadlo. Haddii ay ku adkaato inuu toos ula xiriiro jacaylkiisii wuxuu la xiriiraa cida ay isku fiican yihiin, isagoo ka ururinaya jacaylkiisii.
10. Eegmo Joogto ah
Gabdhaha intooda badan waxaad arkeysaa iyagoo dhahayo, ninkaas maalin walbaa wuu isoo fiiriyaa ma aqaano sababta. Wax kale ma ahan ee wuxuu doonayaa inuu kula wadaago dareenkiisa. Ninka ku jecel wuxuu aad u jecleystaa inuu markasta daawado gabadha uu jecel yahay. Kama dhergayo inuu daawado maanta oo dhan, waayoo waxaa uu ooman nafta. Wuxuu aad u doonayaa inuu daawado iyadoo aan soo eegayn. Eegmadani waa indho-ku-doogsi iyo farxad.
11. Maqnaan xagga maskaxda ah
Waa calaamad aad u mihiim ah, waxaa ninka lagu arkaa maqnaan xagga maskaxda ah, oo markuu hawl hayo ama aanu hayniin waxa lagu arkaa isagoo maskax ahaan baxay. Waxaa ugu weyn ee uu ka fikirayo waa sidii uu ula kulmi lahaa qofkan uu jecel yahay iyo sidii uu ku kasban lahaa.
12. Waa nin aad u shaki badan
Shakiga badan waxa uu astaan u yahay jaceylka xad dhaafka ah. Waana sababaha lagu garto qofka wax jecel, ha ahaado rag ama dumar. Ninka ku jecel wuxuu markaba la soo baxayaa shaki fara badan oo ku aaddan in laga qaadayo jacaylkiisa. Xitaa haddii ay daacad u tahay wuxuu ka shakiyayaa in lagu soo maqan yahay calashaan shabeel naagood inuu jidka ku soo jiro. Haddii uu yara waayo wuxuu u qaadanayaa in ay nin kale ku maqan tahay. Haddii uu dareemo in uu nin kale doonayo gabadha wuxuu u fasiranayaa in dagaal cad lagu so qaaday, oo ay mudan tahay inuu dagaalamo.
Qisha 2: Sidaan ayaa loogu qoraa ninka dhambaal caashaq oo raali galin ah
Ninku marku joogo goobaha ay saaxiibadii ku kulmaan wuu sheekeeyaa wuun dooddaa, laakiin markuu iyada la joogo xaalku wuu is-bedelaa, wuxuu noqdaa nin gabadhu ka gacan sarayso, oo waxaa ka tan badinayo jaceylka xad dhaafka ah ee uu gabadha u hayo.
14. Waa nin Shoowiste ah
Maxay yiraahdaan gabdhaha intooda badan? Alla ninku istaag taag badanaa, Shoowiste asiga ka hor ma jirin. Wuxuu markasta iska dhisaa dhinaca dhar-xirashada ama labiska, Ujeedada ayaa ah inuu soo jiito qofka uu jecel yahay. Wuxuu ka baqayaa in ay ku nacdo lebis xumada. Wuxuuna ku dedaalaa inuu dhar-qurxoon xirto markuu soo marayo meelaha laga helo qofku jeclyahay.
15. Waa Nin Soo Jiidasho Badan
Wuxuu isku dayaa marwalbaa in uu u diro gabadha uu jecelyahay erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh xiliga uu hurdada ka soo kaco ama xiliga uu seexanayo, asigoo inta badan adeegsado ama u diro fariimo jaceyl sida "Qalbi subax wanaagsan" Qalbi Hurdo wanaaagsan" Nolosheyda Riyo Wanaagsan aniga iyo adi oo wada joogno" iyo wixii lamid ah.
Qish 3: Wuxuu ii soo diray warqad jaceyl oo lama filaan ah
16. Waa Nin Romantic ah sida Al fanaan Oomaar
Macnaha wuxuu iska dhigayaa nin wax badan dheer raga kale xittaa haduusan ahayn, Tani ragu waa ay ku kala duwan yihiin waxa ayna ku xiran tahay ilbaxnimadiisa iyo sida uu u badsado daawashada aflaanta romantiga ah. Wuxuu isku dayaa fikrad kastaa oo uu isdhahayo weey ka heleysaa inuu u isticmaalo. Raga tani ma wada yaqaanaan oo waxaa ku jiro xabadkoo iska suufi ah. Marka ha is dhihin xariifkaan aniga i jecel, asiga iyo romantic waa kaaf iyo kala dheeri.
Calaamadahaan oo dhan
Inaad ogaato ninka ku jecel gaar ahaan ninka daacad kuu ah waxay ku xiran tahay hadba sida aad isha ula raacdo.
W:Q- Zakariye C/ Raxmaan (Mocow) Erayo Jaceyl - Team